एक्ने औषधिहरू खरीद गर्नुहोस् र स्पष्ट छालाको मजा लिनुहोस्! 50०% सम्म छुट!
एक्ने के हो?
मुँहासे एक साधारण छाला विकार हो कि अत्यधिक मानसिक समस्या प्रदान गर्दछ। एक्ने पीडित र जो एक अवस्था बाट पीडित छ जो dermatologists कल रिटेंशन केराटोसिस, भन्दा बढी सक्रिय सेबेशियस ग्रन्थीहरू छन् जसले छालालाई सतहमा मृत कोशिकाको साथ बन्द गर्दछ र यसको परिणामस्वरूप ब्याक्टेरिया प्रजनन हुन्छ।
मृत छाला कोषहरू लगातार एपिडर्मिसबाट बगिरहेको छ। कहिलेकाहिँ, र विशेष गरी तेलमा छालामा, यी कोषहरू टाँसिदैनन् र यसरी निर्माण गर्न सक्दछन्, अन्तत: पोरहरूमा खोल्दा पछाडि झर्छ, र नतीजामा प्वाल रोकिन्छ।
ताजा हावा अपुत्रकारी अक्सिजन वितरण गर्नको लागि फोलिकलमा भित्र जान सक्दैन। नतिजा एक न्यानो न्यानो वातावरण संग एक प्लग छेद छ। यो जीवाणुहरूको लागि उत्तम प्रजनन मैदान हो। जब ब्याक्टेरियाहरू भेला हुन्छ र बढ्दै जान्छ, यो फोलिकलमा फुलिन्छ र सूजन आउँछ। दुबै ह्वाइटहेड्स र ब्ल्याकहेड्स "माइक्रोक्रोमेडोन" को रूपमा सुरू हुन्छ। यी या त ह्वाइटहेड वा ब्ल्याकहेड वा अन्ततः पस्टुल स्पट हुन्छन्।
यो रोगजनक कारकहरूसँग सम्बन्धित छ जुन व्यायामको लागि उपचार योजना बनाउनको लागि सम्बोधन गर्नुपर्दछ। तपाईं ईन्फ्लेमेसन, उच्च सक्रियता, अत्यधिक सेबम, र उपचार गर्दै हुनुहुन्छ पी एक्ने। यो तपाईको उपचारको प्रकारलाई कत्तिको गम्भीर छ त्यसमा निर्भर गर्दछ। केहि अवस्थाहरूमा, सामयिक वा प्रणालिक एन्टिबायोटिक प्रयोग गर्न आवश्यक पर्दछ र यदि प्रतिरोधको उद्भव कम गर्न बेन्जोयल पेरोक्साइड आवश्यक छ भने।
यसको सामना गर्न जति गाह्रो छ, यो जान्नु महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईं एक्लो हुनुहुन्न। एक्ने उपचार मैल टाढा देखिन्छ, तर प्रत्येक यात्राको यसको सुरु हुन्छ। यो बुझिन्छ कि धैर्य अविश्वसनीय गाह्रो छ जब तपाइँको अनुहारमा तपाईका समस्याहरू लेखिएका छन्। यद्यपि यो कठिन र समय खपत हुने जस्तो देखिन सक्छ, तपाईंको छालाले राम्रो दिन देख्नेछ यदि तपाईं आफ्नो जटिल मार्गमा दृढ रहनुभयो भने।
को एक्ने हुन्छ?
सबै जाति र उमेरका व्यक्तिहरूले यस कष्टकर छालाको अवस्था पाउँछन्। किशोर-किशोरीहरू र युवा वयस्कहरूमा यो सामान्य छ। ११ र 80० वर्षबीचका सबै व्यक्तिहरूको अनुमानित percent० प्रतिशतमा कुनै बिन्दुमा एक्ने प्रकोप हुन्छ।
धेरै व्यक्तिहरूको लागि, यो तिनीहरू तेर्सो पुग्ने समयबाट टाढा जान्छ; यद्यपि, उनीहरूको चालीस र पचासको दशकमा केहि मानिसहरूमा यस छालाको समस्या रहिरहन्छ।
यो छालाको अवस्था बिभिन्न रूपहरूमा आउँदछ र सामान्यतया यसको आकार र तीव्रता द्वारा पहिचान हुन्छ, र सबै उमेरका मानिसहरूलाई दु: ख दिन्छ। सामान्यतया, गम्भीर फार्महरू हल्का फार्मबाट विकास हुन्छन्; जबकि अरू स्वतन्त्र रूपमा विकसित हुन सक्छ।
फार्म जब छालामा कपाल follicle (pore) sebas (छाला द्वारा उत्पादित एक प्राकृतिक तेल) को एक अत्यधिक उत्पादनले भरिएको हुन्छ, मृत कोशिका र ब्याक्टेरिया द्वारा संक्रमित हुन्छ। यसले संक्रमणको बिन्दुमा सूजन (सूजन, रातो र पीडा) निम्त्याउँछ।
यसको सुरुवात घावको सबैभन्दा सानो प्रकार हो, यसलाई माइक्रोक्रोमेडो भनिन्छ। यस माइक्रोकोमोडोको विकासमा निर्भर रहन्छ, यो खुला कमेडो वा बन्द कमेडोमा विकास हुन सक्दछ।
तपाईं उपलब्ध विभिन्न एक्ने उपचार संग आफ्नो pimples को छुटकारा प्राप्त गर्न प्रयास गर्न सक्नु अघि, तपाईं मुखावरहरूको किसिमको बिरूद्ध हुनुहुन्छ थाहा हुनुपर्दछ। यहाँ विभिन्न प्रकारको एक सिंहावलोकन छ:
एक्ने भल्गारिस - यो सब भन्दा साधारण रूप हो, जुन दुबै ब्ल्याकहेड्स (ओपन कमेडो) र ह्वाइटहेड्स (बन्द कमेडो) को समावेश गर्दछ। एक्नेको यो फारम उपचार गर्नको लागि एक्नेको सजिलो रूप हो
ब्ल्याकहेड्स - ब्लैकहेड्स विकसित हुन्छन् जब pores आंशिक रूपमा मृत छाला कोषहरू, ब्याक्टेरिया र सेबम द्वारा ब्लक हुन्छ। यस पिम्पलको कालो रंग फोहोरको कारणले होइन, तर बाहिर आउँदो छाला रments्गहरू हावामा अक्सिजनको साथ प्रतिक्रिया गर्दछौं। ब्ल्याकहेड्स उपचार गर्न गाह्रो हुन सक्छ।
व्हाइटहेड्स - ह्वाइटहेड्स पूर्ण अवरुद्ध पोर्सको उत्पादन हो पोअर ब्याक्टेरियाहरू, तेल र मृत छाला कोशिकाले भरिन्छ, र यो मिश्रण छालाको ठीक सेतो देखिन्छ। ह्वाइटहेड्स ब्ल्याकहेड्स भन्दा उपचार गर्न सजिलो हुन्छ।
प्यापुल्स - Papules संक्रमित र फुलेको छेद रोकिन्छ। तिनीहरू छालाको सतहमा रातो बम्पको रूपमा देखा पर्छन्। यी पिम्पल्सलाई कहिले निचोर्नु हुँदैन, किनकि यसले संक्रमणलाई वरपरका क्षेत्रहरूमा फैलाउँदछ, निको पार्ने काममा बाधा उत्पन्न हुन्छ र दाग लाग्न सक्छ।
पुस्टुल्स - पुस्टुलहरू सेतामा झैं देखिन्छन्, यी बाहुलाहरू फुलेको बाहेक, रातो देखिन्छ र सेतो वा पहेलो केन्द्रको कारण मवादको कारण हुन्छ। प्राय जसो पिम्पल्स वा zits भनिन्छ, pustules हुन जान्छ।
nodules - नोड्युलहरू, वा सिटर्स, एक्नेको गम्भीर रूपहरू हुन् जसले छालाको सतह मुनिका भरी, थैली जस्तो संरचनाहरू हुन्। यस प्रकारको एक्नेबाट छुटकारा पाउन लामो समय लिन्छ। नोड्युलहरू कहिले निचोर्नु हुँदैन। निचोल्दा संक्रमणलाई प्राथमिक इन्फेक्सन साइटको वरपरका अन्य ऊताहरूमा फैलिनेछ र उपचारलाई अझ गाह्रो बनाउँदछ। नोड्युलहरू धेरै पीडादायी छन् र दाग धेरै सामान्य छ र अन्य रूपहरूद्वारा भएका भन्दा धेरै खराब हो।
सिस्टिक एक्ने - सिस्टिक एक्ने सबैभन्दा सेभर रूपहरू मध्ये एक हो। सिस्टिक फार्म प्राय: साना पुस भरिएको एक्नेको निचोइको कारण आउँदछ। यसले पुस छालाको ऊतकमा गहिरो यात्रा गर्न दिन्छ। यी सूजन नरम पुस भरिएको छाला बम्प ठूलो, दर्दनाक र उपचार गर्न गाह्रो छ। सिस्टिक एक्ने दुबै अनुहार र शरीरको अन्य क्षेत्रलाई असर गर्न सक्छ।
एक्ने रोजासिया - एक्ने रोजासिया, वा अधिक सही रूपमा रोजेसिया भनिन्छ, पुरानो छालाको अवस्था हो जुन रातो दाग जस्तो देखिन्छ। यो प्राय: मध्यम छाला वयस्कहरूलाई उचित छालाले असर गर्छ। पिम्पल्स प्राय: पुरानो दानाको साथ हुन्छ, जुन प्रायः निधार, गाला, नाक, र चिनीमा सीमित हुन्छ। रोजासियाको कारण अज्ञात छ, तर जेनेटिक्सले योगदान पुर्‍याउने कारक हुन सक्छ। गम्भीर, उपचार नगरिएको रोसासियाको कारणले गर्दा विफल हुने दागहरू लाग्न सक्छ।
एक्ने कांग्लोबाटा - एक्ने कlo्गलोबाटा सिस्टिक एक्नेको अत्यन्त गम्भीर रूप हो, सामान्यतया १ 18 र 30० वर्ष बीचका पुरुषहरूलाई यसले असर गर्दछ। यो फारम गहिरो, भड़काउने नोड्युलले छुट्याईन्छ जुन छाला मुनि अन्य नोड्युलमा जोडिन्छ, धेरै ठूला ब्ल्याकहेड्सको साथ। यी पिम्पल्स वर्षौंसम्म रहन सक्छ र ठूलो दाग पैदा गर्दछ, र उपचार गर्न गाह्रो छ।
हल्का एक्ने प्रायः घरेलु उपचारको लागि उत्तरदायी हुन्छ, तर यदि तपाईंसँग गम्भीर रूपहरू छन् भने तपाईंले आफ्नो प्रकारको उत्तम उपचारहरूको बारेमा निर्णय लिन मद्दतको लागि त्वचा विशेषज्ञ वा स्वास्थ्य पेशेवरसँग परामर्श लिनु पर्छ।
यस छालाको अवस्थाले सुन्दर र अन्यथा स्वस्थ देखिने छालालाई धेरै हदसम्म नष्ट गर्न सक्छ, विशेष गरी जब प्रगतिको लागि अनुमति दिइन्छ।
धेरै पिम्पल्स र स्पटहरू एकै समयमा देखा पर्दछ वा केहि थोरै, र यीमा निर्भर गर्दै, यो छालाको अवस्थाको रूपमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ
- ग्रेड 1 - जसमा सामान्यतया ब्ल्याकहेड्स सम्मिलित हुन्छ
- ग्रेड2- अधिकतर व्हाइटहेड्स समावेश गर्दै, तर ब्ल्याकहेड्स पनि उनीहरूसँग हुन सक्छ
- ग्रेड3- पुस भरिएको पिम्पल-जस्तो छालाको उचाइ
- ग्रेड4- यो साना चाकू संलग्न बन्द मुसब्चा भरिएको छाला थैलीहरू जो एक्ने को गम्भीर रूप मा मानिन्छ सामान्यतया सूजन र पीडादायी।
यो अधिक सामान्य रूपमा किशोरावस्थामा देख्न सकिन्छ, प्रायः निधारको वरिपरि देखा पर्दछ, र कहिलेकाँही नाकमा पनि। सानो व्हाइटहेड्स पनि समय मा ठुलो क्षेत्र वरिपरि नोट गर्न सकिन्छ। यद्यपि वयस्कहरूले पनि पछि जीवनमा हल्का रूपको अचानक विकास भएको याद गरे।
छाला अस्थिरताको पहिलो लक्षण एक्ने विकासको लागि अग्रसर हुने देखिन्छ, चिल्लो तेल लाग्ने छाला, खुला ब्ल्याकहेड्स, प्राय: ती मध्ये धेरैजसो एकै समयमा हुने। यद्यपि यस अवस्थामा प्राय: कुनै छालाको सूजन देखा पर्दैन।
हल्का वा ग्रेड १ एक्ने एक चरणमा छन् जुन उपचार गर्न एकदम सजिलो छ। ओभर-द-काउन्टर सामयिक एजेन्टहरू र राम्रो स्वच्छता अवस्थालाई राम्रो नियन्त्रणमा ल्याउन पर्याप्त छ। यो अवस्था मा कुनै सुधार याद गर्न को लागी एक महिना को लागी लिन सक्छ, तर जबacacne उपचार शुरू हुन्छ, pimples को प्रगति रोक्न सक्छ।
जस्तो कि यसले सुझाव दिन्छ, यो एक्नेको हल्का रूप भन्दा केही उच्च श्रेणीको हुनेछ। ब्ल्याकहेड्स र व्हाइटहेड्स सामान्यतया एउटा सानो क्षेत्रमा सीमित हुनु भन्दा बढी फराकिलो हुन्छन्। दागहरू पस गठनको कारण थोरै ठूलो आकारको हुनेछ, र हल्का सूजन पनि यस चरणमा नोट गर्न सकिन्छ। महिलाहरूमा ब्रेकआउट्स प्राय: उनीहरूको मासिक धर्म चक्रसँग मिल्दछ, या त मासिक-मासिक या मासिक धर्मको समयमा।
मध्यम वा ग्रेड २ एक्नेलाई जीवाणुहरूलाई मार्नको लागि र छालाको माथिल्लो सतहलाई तहको तहबाट कास्ट गर्न सालिसिलिक एसिड र बेन्जोयल पेरोक्साइड क्रीमको संयोजन आवश्यक पर्दछ, जसबाट मुरुहरू हटाउन सकिन्छ। फेरि राम्रो सरसफाइ, जस्तै अतिरिक्त सिमुम हटाउनको लागि नियमित रूपमा क्षेत्र धुनु, र बारम्बार लिने वा कमोडोन निचोडमा जोगिन पछ्याउनुपर्नेछ।
छालाको जलनको तीव्रता र दागहरूको संख्या ग्रेड १ र २ को तुलनामा व्यापक हुनेछ, यस चरणमा, जुन बरु गम्भीर मानिन्छ। पिम्पल जस्तो छालाको उचाई, सामान्यतया पुस भरिन्छ र क्रोधित हेराई संख्यामा अधिक हुनेछ, र अन्य ठाउँमा पनि देखा पर्दछ, जस्तै छाती र माथिल्लो पछाडि क्षेत्रहरू।
यस चरणमा, तपाईंको छालाको उपचार बढी गम्भीर वा ग्रेड form फारममा रोक्नको लागि उपचार गरिनुपर्दछ, जुन प्राय: कुनै पनि प्रकारको उपचारमा प्रतिक्रिया दिन ढिलो हुन्छ। सामयिक क्रिमको साथसाथै, मौखिक औषधिहरू पनि वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न सल्लाह दिइनेछ। छाला exfoliating एजेन्टहरू दाग रोक्नको लागि प्रयोगको लागि पनि राखिन्छ जुन सम्भवतः एक्ने गठन द्वारा पछाडि छोडिन्छ।
ग्रेड Ac एक्ने
यस चरणमा, ब्रेकआउट गम्भिर हुनेछ। यसले ठूलो सिस्टहरू, नोडुलर हेराइको रूपमा प्रस्तुत गर्दछ, छालाको सूजनको ठूलो डिग्री देखा पर्‍यो।
सामयिक र मौखिक एजेन्टको साथ, हल्का थेरापी पनि अगाडि एक्ने ब्रेकआउट्स नियन्त्रण गर्न पछ्याउनुपर्नेछ। यद्यपि यो एक्नेको दुर्लभ रूप मानिन्छ, सामान्यतया विकासको तेस्रो चरणमा, व्यक्तिहरूले सहयोगका लागि चिकित्सा पेशेवरहरूसँग सम्पर्क राख्छन्।
किन तपाईं एक dermatologist सम्पर्क गर्नु पर्छ
एक योग्य छाला चिकित्सक - एक त्वचा विशेषज्ञ - जब तपाई एक्ने पिल्स खरीद गर्न चाहानुहुन्छ कलको पहिलो पोर्ट हो। समस्याको कारणको निदान गर्न तपाईको डर्मेटोलजिस्टलाई भेट्न आवाश्यक हुन्छ ता कि उचित एक्ने औषधि दिइनेछ। जे होस्, तपाईसँग अझै केही विचार हुनुपर्दछ कि एक्ने औषधि कस्तो प्रकारको अफरमा छ र कस्तो प्रकारको प्रभाव केहि निश्चित उपचारहरूको हुनेछ।
यस छालाको अवस्थालाई हल्का, मध्यम र गम्भीर रूपमा वर्गीकृत गर्न सकिन्छ। सिस्टिक एक्ने जस्ता गम्भीर प्रकारमा यसलाई छाला विशेषज्ञहरूले उपचार गर्ने सावधान विधिको आवश्यक पर्दछ। छाला विशेषज्ञलाई उपचारको बिभिन्न प्रकारहरु थाहा छ र तपाईले चाहानु भएको कुनै पनि उपचार छान्न सक्नुहुन्छ। केहि केसहरूमा त्वचा विशेषज्ञले यस भयानक छाला अवस्थाबाट छुटकारा पाउन सही औषधी दिन विफल हुन्छन्। सामान्यतया यदि तपाइँ तपाइँको छाला विशेषज्ञलाई नयाँ ग्राहक र लागू गरिएको उपचारहरुमा नयाँ हुनुहुन्छ भने छालाको जलन सम्भव छ।
एक्ने औषधि यसको आफ्नै अनौंठो सूत्र छ। केहि प्राकृतिक र केहि औषधिहरूको संयोजनले सिर्जना गरिएको हुन्छ जुन छालामा कोमल र सुखदायक हुन्छन्, अरूले पनि अधिक रसायनको साथ सिर्जना गर्दछन्। त्यहाँ एक्ने औषधि छ जुन महँगो र अरूको लागि प्रभावकारी छ तर यसको विपरीत तपाईमा काम गर्दैन। मुख्य चिन्ताको मूल्य भनेको सही औषधी छनौट गर्नमा फरक पर्दैन।
किन तपाईं एक्ने औषधि को साथ शुरू गर्नुपर्छ
व्यक्ति जो यस छालाको समस्याबाट ग्रस्त छन् तिनीहरूले प्रभावकारी औषधीहरूको प्रयोगको महत्त्व बुझ्दछन्। यसबाट पीडित हुने अप्ठ्यारो तत्काल रोकिनु पर्छ। कसैलाई पनि अस्वीकृत गर्नु हुँदैन किनकि त्यो कुरूप pimples छ। तपाईको अनुहार र शरीर खाली गर्नका लागि पर्याप्त असर पार्ने उपचार खोज्नुहोस् र भविष्यमा हुने ब्रेकआउट्सलाई रोक्नुहोस्। यो अहिले रोक्नुहोस् यो तपाईंको वर्तमान छाला अवस्था खराब गर्न अघि।
काउन्टरमा औषधीहरू सामान्यतया हल्का हुन्छन् र जीवाणुबाट छुटकारा पाउन एक्ने एन्टिबायोटिक र अन्य रसायनहरू समावेश गर्दैन; जबकि प्रिस्क्रिप्शन एक्ने औषधिले तपाईंलाई यस छाला अवस्थाको अधिक गम्भीर प्रकारहरू हटाउन थोरै अतिरिक्त दिन्छ।
काउन्टर सामयिक एक्ने औषधीमा केहि सामान्य छन्:
सेलिसिलिक एसिडको एक प्राकृतिक स्रोत बोट व्हाइट विलोमा फेला पार्न सकिन्छ र शताब्दीयौंदेखि दुखाइ र पीडा कम गर्न र ज्वरोलाई कम गर्न को लागी जानिन्छ। यसको रासायनिक मेक अप एस्पिरिनसँग मिल्दोजुल्दो छ।
एक उपचार को रूप मा, यो छाला को सतह कोशिका अधिक सजिलै बहाउन को कारण हुन्छ, भरिएको पोरमा जीवाणु नष्ट र छेद आकार को न्यूनतम ताकि थप संक्रमण हुन सक्दैन। यसले नयाँ कोषहरू उत्पन्न गर्न मद्दत गर्दछ।
एफडीएले छालालाई घामबाट बचाउन सिफारिश गर्दछ सलिसिलिक एसिडको साथ उत्पादनहरू प्रयोग गर्दा।
१ 1920 २० को दशकमा पत्ता लगाईयो कि यसले पिम्पल्सको उपचार गर्न सक्दछ, बेंजोयल पेरोक्साइड सामयिक क्रीम वा जेलको रूपमा प्रयोग हुन्छ। यो शुरू गर्न २.%% का घनता प्रयोग गर्न सिफारिस गरिएको छ, र बिस्तारै%% र १०% सम्मको घनत्व निर्माण गर्न पछि छाला एक सहनशीलता विकास गर्न सके पछि।
बेन्जोयल पेरोक्साइडले ब्याक्टेरियाहरूको pores लाई सुख्खा र खाली गरेर र सेल नविकरणको गतिमा काम गर्दछ।
रिसोरसिनोल एक रासायनिक यौगिक हो जुन एन्टिसेप्टिक र कीटाणुनाशक गुणहरू हुन्छ। सामान्यतया एक्जिमा र सोरायसिस जस्ता धेरै गम्भीर छालाका रोगहरूको लागि प्रयोग गरिन्छ, २% वा थोरै एकाग्रताको एक सानो खुराकमा, रिसोरसिनोल पनि एक्ने एक प्रभावी औषधी हो।
तल साधारण पर्चा एक्ने औषधीहरूको सूची छ:
एन्टिबायोटिक मौखिक एक्ने औषधिको एक वर्ग, क्लिन्ड्यामासिन एरोबिक (अक्सिजन आवश्यक छ) र anaerobic (अक्सिजन आवश्यक छैन) ब्याक्टेरिया संक्रमणको विरूद्ध सबैभन्दा प्रभावकारी हुन्छ।
जब शीर्ष रूपमा लागू गरिन्छ, यसले पिम्पल्ससँग लड्न मद्दत गर्दछ र बेन्जोयल पेरोक्साइड वा एडापेलिन (एक retinoid) को साथ प्रयोग गर्दा सबैभन्दा प्रभावकारी हुन्छ।
एन्टिबायोटिक जुन पेनिसिलिनसँग मिल्दोजुल्दो छ, यो पिम्पल्सको उपचार गर्नको लागि उत्तम मलम, क्रीम वा जेलको रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
टेट्रासाइक्लिन जीवाणु संक्रमणको बिरूद्ध लड्नका लागि एन्टिबायोटिकको पनि एक रूप हो। यो एक्ने र रोसेसियाको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ। यसको साइड इफेक्टमा दाँतको रंगबिच्छेदन समावेश छ, र गर्भवती महिलाहरूले लिनु हुँदैन।
Tretinoin (ब्रान्ड नाम: Accutane) भिटामिन ए को एसिड रूप हो र यो एक्ने औषधि द्वारा अधिक सामान्य रूपमा चिनिन्छ रेटिन ए ट्रेटीनोइनले केराटोसिस पिलारिसको उपचार गर्दछ (छालामा कुखुराको छाला जस्तो देखिन्छ कि छालाको छाला जस्तो देखिन्छ) र छालाको बुढो हुने प्रक्रियालाई ढिलो देखाइएको छ।
साइड इफेक्टमा खुजली, रातो र जलेको सेन्सेशन समावेश छ। यो आवश्यक छ रेटिन A को प्रयोग गरी तपाईंको त्वचा विशेषज्ञको सिफारिसहरूलाई ध्यानपूर्वक पालन गर्नुहोस् र सूर्यबाट बच्नुहोस्। Tretinoin छाला पातलो हुन्छ, वैक्सिंग पनि हटाउनु पर्छ।
अकाउटेनका फाइदाहरू र प्रतिकूल प्रभावहरू
यो सामान्यतया ज्ञात छ कि औषधि एक्यूटेनले pimples बाट पीडित व्यक्तिहरूमा एकदम राम्रो परिणाम प्रदान गर्दछ। अर्कोतर्फ, यसले केवल धेरै प्रतिकूल प्रभाव प्रदान गर्दछ यदि यसलाई प्रयोग गर्ने व्यक्ति गर्भवती छ भने। अक्युटेन अन्तिम रेखा ड्रग मानिन्छ र प्राय: जब केही पिम्पल्सको लागि काम गर्दैन जस्तो गरीन्छ। तसर्थ यस परिदृश्यमा हामीले सिक्यौं कि त्यहाँ केहि शर्तहरू छन् जसमा कसैले एक्नेको लागि औषधि लिनुहुँदैन किनभने उनीहरूले प्रतिकूल प्रतिक्रियाहरू निम्त्याउन सक्छन र लाभदायक हुँदैनन्, तर एक व्यक्तिलाई यो तथ्य थाहा हुनुपर्दछ र औषधिलाई पूर्णतः दोष दिनु हुँदैन र पाउनु पर्छ। उनीहरूका औषधिहरू प्रयोग गर्नु अघि उनीहरूको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकबाट उनीहरूको स्वीकृति लिइएको छ।
महत्वपूर्ण नोट: कुनै योग्य डाक्टरलाई परामर्श नगरी माथि गम्भीर फारमहरूको लागि कुनै पनि औषधि प्रयोग वा सेवन नगर्नुहोस्। यो पोष्ट सूचनामूलक उद्देश्यका लागि मात्र हो र चिकित्सा सल्लाहको रूपमा हेरिने छैन।
जो एक्ने मानिसहरु डिप्रेशन बाट ग्रस्त छन्। जब तपाइँको किशोर किशोरावस्थाको बृद्धि समयमा पिम्पल्स हुन्छन्, यसले तपाइँको सामाजिक जीवनमा बाधा पुर्‍याउँछ। यसले तपाईलाई रीस, दुश्मनीको भावसम्म पनि पुर्‍याउन सक्छ। तपाइँ मुड परिवर्तन र डिप्रेशन को रूप मा परिचित छ। औषधीको उपचारले तपाईंलाई ती समस्याहरूमाथि विजय लिन मद्दत गर्दछ। तपाईंको चिकित्सकले तपाईंको अवस्थालाई हेर्छ र तपाईंको धेरै समस्याहरूमाथि विजय हासिल गर्न मद्दत गर्न सक्छ। जब तपाई ड्रग्स आईसोट्रेटिनोइन लिईरहनु भएको छ र आत्महत्या गर्ने विचारहरु लाई महसुस गर्नु भएको छ, तपाईले तुरुन्त आफ्नो डाक्टरलाई जानकारी दिनु पर्छ। यस औषधिले केही व्यक्तिहरूमा उदासिनता र आत्महत्या गर्ने प्रवृत्ति बढाउँदछ। यस ठाउँमा छालाको अवस्थाबाट छुटकारा पाउनको लागि जसले Isotretinion प्रयोग गरिरहेछन् तिनीहरूको ट्र्याक राख्न अब एक जनादेश प्राप्त रेजिस्ट्री छ।
साथै, लेजर थेरापी पछ्याउन सकिन्छ, जसले सफलतापूर्वक सेबेशियस ग्रन्थिहरू नष्ट गर्दछ जुन सामान्यतया के हुने हो जुन समस्यालाई पहिलो स्थानमा गर्दछ।
एक्ने हानिकारक छाला समस्या होईन भनेर मानिदैन र वास्तवमा एक्लै छोड्न सकिन्छ यदि व्यक्तिले तिनीहरूलाई प्रभाव पार्दैन जस्तो देखिन्छ। उत्तम एक्ने उपचार केवल गम्भीर मामिलाहरूको लागि आवश्यक हुन्छन्। Roaccutane अनलाइन खरीद गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्.